६० रुपैयाँबाट सुरु भएको समृद्धिको यात्रा
नपढेको मान्छेले पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने रौतामाई गाउँपालिका–४ सल्लेका ५२ वर्षीय टेकबहादुर पाठकलाई आत्मविश्वास थियो ।
चेपाङ समुदायको जीवनस्तर फेरियो
केही वर्ष अघिसम्म गिठा, भ्याकुर, सिस्नो र टाँकी खाएर जीविकोपार्जन गर्ने चेपाङ समुदायका मानिस अहिले तरकारी बेचर चामल किन्छन् भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । तर, धादिङको बेनिघाट रोराङ–६ बुम्राङका चेपाङहरू तरकारी र फलफूल बिक्री गरेर चामल खरिद गर्ने गर्दछन् ।
काठमाडौं स्टिलको इजाजतपत्र खारेज
नवलपरासीस्थित काठमाडौं स्टिलले उत्पादन गरेको फलामे डन्डी गुणस्तरहीन रहेको भेटिएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले काठमाडौं स्टिलद्वारा उत्पादित डन्डी तोकिएको मापदण्डअनुरूप नभएको फेला पारेपछि त्यसको इजाजतपत्रसमेत खारेज गरेको हो ।
नेपालमा चिनियाँ सुन तस्कर सक्रिय : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले नेपालमा चिनियाँ सुन तस्कर सक्रिय रहेको बताएका छन् । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङसँगको भेटमा गृहमन्त्री थापाले सुन तस्करीमा चिनियाँ आपराधिक गिरोहको संलग्नता रहेकोले त्यसविरुद्ध चीन सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री र कर्मचारीबाटै असहयोग भयो :मुख्यमन्त्री राई
प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्री र कर्मचारीले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रका कारण विकासको कामलाई गति दिन नसकेको उनको भनाइ छ । विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, “मसँग प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीको टिम स्पिड मिलिरहेको छैन । यसले गर्दा जनताको चाहनाअनुसार काम भइरहेको छैन ।”
विश्व वातारवरण दिवसमा सूर्य नेपाललाई प्रमाण पत्र
वातावरण संरक्षणमा बाराको सूर्या नेपाल प्रालि प्रथम भएको छ । वातावरण संरक्षणमा प्रथम स्थानमा रहन सफल रहेको भन्दै उसलाई विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
दलाई लामालाई पूर्वराष्ट्रपति यादवसँग भेटाउने तयारी
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई अमेरिकाको सिकागोमा आयोजना हुने विश्व हिन्दू सभामा बोलाउन केही हिन्दूवादी संगठनका नेताहरूले प्रयास गरिरहेका छन् । गणतन्त्र हिन्दू राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा डा. यादवले प्रदर्शन गरेको भूमिकालाई कदर गर्नुपर्ने अवधारणासहित उनीहरूले आयोजकसमक्ष लबिङ गरिरहेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।
तस्करसंग पैसा लिदै गर्दा फोटो खिच्ने पत्रकारमाथी प्रहरीले गर्यो हातपात
महोत्तरीको सम्सीमा एक तस्करसंग पैसा लिईरहेका प्रहरीको फोटो खिच्दा एक पत्रकारमाथी प्रहरीले हातपात गरेको छ । नेपाल टेलिभिजनका महोत्तरी संवाददाता राजिव राय कुर्मीलाई फोटो किन खिचेको भन्दै प्रहरी हवल्दार राजेन्द्र वहादुर वस्नेतले हातपात गरेका हुन् ।
फस्टाउँदै सामूहिक स्याउ खेती
जुम्ला स्याउमा आत्मनिर्भर जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ । यहाँका पाखाबारी पनि स्याउ बगैंचामा परिणत छन् । जुम्लाका १८ हजार घरधुरीमध्ये झन्डै १६ हजारले स्याउ खेती गरेका छन् ।
तरकारी र च्याउखेतीले फेरियो जीवन
विगतमा परम्परागत शैलीबाट खेती किसानी गर्दै आएका बाँके कोहलपुर–२ आनन्दनगरका कुलबहादुर रोकायाले ५ वर्षदेखि व्यावसायिक कृषि पेशा शुरु गरेका छन् । उनले मैटहवामा दुई विगाह जमिन भाडामा लिएर ब्यावसायीक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् ।
व्यावसायिक अग्र्यानिक तरकारी खेतीमा आकर्षण
पछिल्लो समयमा डडेल्धुराका किसान व्यावसायीक अग्र्यानिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । बजारमा पाइने विषादी प्रयोग गरिएको तरकारीले स्वास्थ्यमा असर पर्न थालेपछि यहाँका किसान व्यावसायिक अग्र्यानिक तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका हुन् ।
चीनबाट सुन र डलर तस्करीः गृह मन्त्री बादल
गृह मन्त्री राम बहादुर थापा बादलले चीनबाट डलर र सुन तस्करी हुने गरेको भन्दै नियन्त्रणका लागि चिनियाँ सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
कालिकोट र अछामको सीमा विवाद सहमतिमा टुंग्याइने
लामो समयदेखि कायम रहेको कालिकोट र अछामको सीमा विवाद प्राविधिक टोलीबाट टुंग्याउने सहमति भएको छ । कालिकोट नरहरीनाथ गाउँपालिका वडा ८ र ९ लालु र अछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ बीच रहेको कालेगाडा सीमा विवाद प्राविधिक टोलीले टुंग्याउने सहमति भएको हो ।
४ करोडसहित ७ हुन्डी कारोबारी पक्राउ
५१ लाख रुपैयाँ नगद र ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँको चेकसहित ७ जना हुन्डी कारोबारी प्रहरी फन्दामा परेका छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले न्युरोडका ७ जना व्यापारीलाई हुन्डी कारोबार गरेको अभियोगमा नगद तथा चेक गरी करिब ४ करोडसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।